नेपाल सेवा लघुवित्तको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपिओ) निस्काशन
नेपाल सेवा लघुवित्तले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपिओ) जारी गर्ने भएको छ ।
लघुवित्तले बैशाख १२ देखि १६ गतेसम्म सर्बसाधारणका लागि सेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गरेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले न्युनतम ५० कित्ता र अधिकतम ९०० कित्ता शेयरमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल सेवा लघुवित्तले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपिओ) जारी गर्नको लागि गत मंगलबार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाएको हो । लघुवित्तले एक सय रुपैयाँ अंकित दरको एक लाख ८० हजार कित्ता आइपिओ जारी गरेको हो ।
लघुवित्तले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत सर्बसाधारण लाई आइपिओ शेयर जारी गर्न लागेको हो ।
लघुवित्तले साधारण सेयर जारी गर्नका लागि एनएमबी क्यापिटललाई सेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको १२ वटा गाविस सहित रसुवा र नुवाकोट गरी ३ जिल्लामा आठ वटा वटा शाखा कार्यालय मार्फत लघु वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको लघुवित्तको अध्यक्ष मा मदन गोपाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। लघुवित्तको अधिकृत पूँजी १० करोड रहेको छ भने जारी पूँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
साधारण सेयर निष्काशन पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । लघुवित्तले दोस्रो त्रैमासिक सम्म खुद नाफा करिब १३ हजार कमाएको छ भने, जगेडा कोष मा जम्मा ११ लाख रहेको छ ।
नाडेप लघुवित्तको ४ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको आईपीओ आउने, कति पायो रेटिङ ?
काठमाण्डौ । इक्रा नेपालले नाडेप लघुवित्त बित्तीय संस्थाले जारी गर्न लागेको ४ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको आइपीओ साधारण सेयर (आइपीओ)लाई आइपीओ ग्रेड फोर प्लसको ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ कम्पनीको बित्तीय अवस्था औसत भन्दा तल रहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । कम्पनीको समग्र अध्यन गरेर इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्ने गर्दछ । जसमा ग्रेड १ ले बलियो आधारहरु जनाउँछ भने ग्रेडिङ्ग ५ ले कमजोर आधारहरु रहेको जनाउँछ । ग्रेड २, ३ र ४ मा प्रयोग गरिने प्लस चिन्हले त्यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाई जनाउँदछ ।
धादिङको गजुरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लघुवित्तको आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा माघ मा नै आवेदन दिइसकेको छ ।
लघुवित्तले निकट भविष्यमै ४ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको ४ लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । लघुवित्तको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेड रहेको छ ।
← नेपाल सेवा लघुवित्तले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपिओ) निस्काशन
मल्टिपर्पोज फ़ाइनान्स कम्पनिको शेयर मूल्य आज पनि करिब १० % बढ्यो
के तपाईलाई अनलाईनबाट सेयर भर्न आउँदैन ? यो भिडियो हेर्नुहोस सबै कुरा थाहा हुनेछ
June 13, 2018 Biraj Malla 0